Sudan oo sheegtay inay kusoo laabtaan dalka 50 kun oo ah muwaadiniinta ku sugan Sucuudiga - Horn Future
Sudan oo sheegtay inay kusoo laabtaan dalka 50 kun oo ah muwaadiniinta ku sugan Sucuudiga
Kharoum (Horn Future)-Waxa dalka Sudan ku soo laabtay intii lagu guda jiray labadii bilood ee la soo dhaafay in ka badan 20 kun oo Sudani ah oo degganaa dhulka barakaysan ee ay maamusho boqortooyadda Sucuudigu sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi.
Masuuliyiinta dalka Sudan ayaa waxa sido kale ay filayaan in tirada ka tagaysa boqortooyadan ee dalka imanaysa ay kor u kacdo oo ay gaadho ilaa 50 kun maalmaha soo socda.
Karaar al-tuhaami oo ah maasuulka u qaabilsan dalka Sudan waaxda shaqaalaha dibada ka shaqeeya ayaa sheegay in kuwa ku soo laabtay dalka badankoodu ay usoo noqdeen sababo la xidhiidha xadgudubka xagga sharciga degenaanshaha ee dalka ay martida u yihiin.
Waxa sido kale masuulkani uu tilmaamay in tiro yar oo kamid ah dadka soo laabtay ay doorteen inay ka tagaan Sucuudiga sababo la xidhiidha cashuuraha cusub ee dheeraadka ah ee maamulka qoyskani kusoo rogay dadka deggen iyo qoysaskooda,taasoo ku noqotay cadaadis dhaqaale.
Waxa saraakiisha dalka Sudan ay saadaalinayaan tirada kusoo laabanaysa dalka inay gaadho ilaa 50 kun oo qof maalmaha soo socda.
Waxa dalka Sudan kusoo laabtay in ka badan 11 kun oo Sudani ah oo ka tagay Sucuudiga sanadkii 2013 kadib markii ay dhamaatay mudadii boqortooyadani ay u xadiday dadka deegaanka ku ahaa sida sharci darrada ah.
Qoyska Sucuudiga ayaa waxa uu ku dhawaaqay bishan in lagu soo rogay cashuur shisheeyaha ka shaqeeya iyo qoysaskooda taas oo sababta ka dambeeysa lagu sheegay inay tahay dhaqaale xumo aad u ba’an oo haleeshay qoyskan.
Dhinaca kale sabab u weyn ee dhaqaale xumadan dhalisay ayaa lagu sheegay inay tahay in qoyskani ku tagri-falo hantida iyada oo ay u dameeysay in in ka badan (400 $ billion) milyaar oo dollar uu Donald Trump laaluush u siiyay si warshadasha dalkiisa ee hubka sameeya loogu abuuro shaqooyin.
Waxa dhanka kale qoyskani uu ku dhawaaqay dhawaan in boqortooyadan ay ka tagi doonaan in ka badan 600 oo kun oo kamid ah shaqaalaha shisheeye marka la gaadho sanadka 2020.
« Tuulo dalka Kanada ah oo u codeeysay inay kasoo horjeedo in la sameeyo xabaal Muslimiin ah	» 11 kamid ah baananka Cadan oo ku dhawaaqay shaqo joojin kadib markii weerar loo gaystay